Maxay tahay sababta filimka Jagga Jasoos oo dib loo dhigay ma labad? ka ogow halkan
Release Date: 2017(USA)
February 13, 2017 No Comments News, Somali 634 views
Warbixin ay soo saartay Buzz Trade ayey waxay ku sheegtay arin tageero badan oo filimka Jagga Jasoos aysan ku farxin taas oo ah in mar labaad dib loo dhigi doono sababo la xiriira isku dhacyo waaweyn oo kuu aadan taarikhda looo asteeyey filimka markii hore.
Isku dhacyada aya waxa ugusoo horeeya uguna weyn filimka Sarkaar 3 ee daadihinayo xidiga magaca weyn kuleh bollywoodka ee Amitabh Bachchan sidoo kalena ay kula jidho xidigada filimka Kaabil ee Yami Gautam wuxuuna ku beegan 7da April.
Filimka ay daadihinayaan xidigaha kala ah Begum Jaan iyo Vidya Balan ayaa asna ahaan doona 14 isla bisha April, waxaa asbuuc kadib isna shaashadaha shanemoyinka lasari doona filimka Noor ee Sonakshi Sinha iyo waliba filimka Baahubali 2 oo asna ahaan doona April 28deda.
Isku dhacyadaas ayaa sababay in filimka Jagga Jasoos dib looga dhigo waqtigii loo asteeyey waxaana sidoo kale xusid mudan in filimkaan xidigaha kujira ay tageero badan kuleeyihiin bollyoodka balse aysan la tartami karin xidigaha aan kor kusoo xusnay.
Filimkaan ayaa ku socda sheeko ku salaysan jacayl iyo shactiro waxana wada daadihinaya Ranbir Kapoor oo ku matalaya danbi baare la dilay aabihiis kaas oo safar dheer ugalaya siduu usoo afjaro dadki ka danbeyey dilka aabihiis, wuxuuna safarkiisa kula kulmi doono quruxleyda la dadihin doonto jacaylka ee Katrina Kaif.
Madaxda filimka ayaanan shaacin wali waqtiga rasmiga ee la daawan doono filimkaan sanadaha badan qaatay balse sida muuqata oo ahaan doono wixii ka danbeeyey bisha April ee sanadkan 2017.
WOW! Jackie Chan iyo xidiga weyn ee Salman Khan oo damacsan qorsheyaal cusub
Yaab!! Govinda Oo Canshuur Aad U Tiro Badan Lagu Yeeshay .
RASMI: Maxaad kala socota 5tii arimood ee loogu hadal hayskaa badnaa Bollywoodka asbuuca hore
+MUQAAL: Halkaan kabaro 10 filim oo aadan marnaba ka xiiso dhici doonin daawashadooda